Wenzani umsizi wabahlengikazi? | Ukwakheka nezifundo
UMaite Nicuesa | 06/06/2021 10:00 | Ukuziqeqesha
Imisebenzi yezempilo, enokubonakala okubaluleke kangaka namuhla, iqoqa amaphrofayli ahlukahlukene akhethekile. I- abasizi babahlengikazi Bangochwepheshe abenza imisebenzi ebaluleke kakhulu ekunakekelweni kweziguli.
Abanye abantu abangeniswa esibhedlela abanakho ukuzimela okwanele ukwenza imisebenzi yansuku zonke. Ngemuva kwalokho, umsizi ongumhlengikazi unesibopho sokuhlinzeka lokhu kunakekelwa. Isibonelo, omunye wemisebenzi eyenziwa ngulochwepheshe ukusabalalisa amamenyu okudla.
1 Isiza iziguli ekwenzeni imisebenzi ehlukile
2 Ukuqoqwa kwedatha yeThermometric
3 Ukuhambisana nokusekelwa
Isiza iziguli ekwenzeni imisebenzi ehlukile
Ezinye iziguli zingadinga usizo lwangaphandle ukuze zidle. Abanye abantu abanakho ukuhamba okudingekayo ukufeza ukunakekelwa kwenhlanzeko eyehlukile. Kulolu hlobo lwesimo, umsizi uphethe ukusiza umsebenzisi. Omunye wemisebenzi esemqoka yomsizi wabahlengikazi ngu zinikela ngokuhambisana njalo neziguli nemindeni yazo. Ungumuntu okhethekile oyingxenye yenkambiso yalabo abathintekile ukugula okuthile. Ungumuntu okhona, ngakho-ke, uhlola ukuvela nokuthuthuka kwesiguli.
Uphethe nokwendlalela imibhede, agcine izinto zomsebenzi zilungile, ubambisene naye ekulungiseleleni izinsimbi ezidingekayo zokucaciswa kwezivivinyo ezahlukahlukene zezokwelapha.
Ukuqoqwa kwedatha yeThermometric
Imisebenzi yalo msebenzi ichazwe ngokwengqikithi ethile yesikhungo abasebenza kuso. Njengoba, iphrofayili eshiwo ingasebenza esibhedlela, esikhungweni sezempilo, endaweni yokuhlala asebekhulile noma ezikhungweni zokunakekelwa okuyisisekelo. Umsebenzi wale ngcweti uphinde weseke umhlengikazi nodokotela. Isebenza ngokubambisana namanye amalungu eqembu. Ngakho-ke, unganakekela ukulungiselela izinto ezidingekayo ukuze uchwepheshe enze umsebenzi othile. Isibonelo, ngaso sonke isikhathi ngokuqondiswa komuntu ophetheyo, ungenza iqoqo ledatha ye-thermometric.
Ukusebenza eqenjini kungenye yamakhono ahambisana nalesi sikhundla somsebenzi. Uchwepheshe uyingxenye yohlelo oluhleleke ngokuphelele futhi, ngakho-ke, luyasebenzisana ukufeza izinhloso. Ngaphezu kwalokho, lona ngumsebenzi wobuciko oletha injabulo yangempela lapho uqala kulesi sifiso sokwaneliseka komuntu siqu.
Noma iziguli ezimbili zithola ukuxilongwa kwezokwelapha okufanayo, ngasinye sithola iqiniso laso kusuka ezimweni ezithile nezikhethekile. Ukwesekwa ngokomzwelo kubaluleke kakhulu kulabo abazizwa besengozini enkulu. Lokhu kuhambisana akukwazi kuphela ukuvela othandweni lwabangane abaseduze nomndeni. Ochwepheshe bezempilo basebenzisa ubuhlakani obungokomzwelo emsebenzini wabo wansuku zonke. Benza umusa, ukubekezela, ukuzethemba, ithemba, amakhono okuxhumana nabantu, umusa nozwela.
Ngalesi sizathu, umsizi ongumhlengikazi uqinisa ukuqina kwesiguli ngalobu bukhona obaziyo. Uma lo chwepheshe ebone noma yiluphi ulwazi olufikile kubo ngosuku lokugcina, bazokwazisa udokotela noma umhlengikazi ngalolo daba. Le phrofayili ihlala ibambisana nethimba ukufeza inhloso efanayo: ukunikeza ukunakekelwa kweziguli okuhle kakhulu kunqubo yabo yokutakula. Lesi yisimo lapho umsebenzi wabo wansuku zonke uhlelwe khona. Enye yezimfanelo isisebenzi okumelwe sizihlakulele yikhono lokulalela. Isiguli sidinga ukuzizwa sizwakala ngoba, ngokombono womuntu, singahlangabezana nokungabaza, ukwesaba noma ukungaqiniseki. Futhi ukuyilalela kuthulisa futhi kuqede ukukhathazeka.
Abanye abantu banquma ukuqhubeka nezifundo zabo ngemuva kokuthola isihloko soMsizi Wabahlengikazi. Futhi lena eminye yemisebenzi eyenziwa ngulochwepheshe osebenza ngokuzinikela okunjalo emkhakheni wezempilo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » Izaziso » Ukuziqeqesha » Wenzani umsizi wabahlengikazi?
Izivivinyo zabasizi bezokuphatha: Izeluleko ezi-5 zokudlula